Somaliland oo saluug ka muujisay Qorshe aan laga Qayb-galin oo Ciidammo loogu samaynayo Badda Cas | Somaliland Post
Home News Somaliland oo saluug ka muujisay Qorshe aan laga Qayb-galin oo Ciidammo loogu...
Somaliland oo saluug ka muujisay Qorshe aan laga Qayb-galin oo Ciidammo loogu samaynayo Badda Cas
Hargeysa (Slpost)- Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi, ayaa ka hadlay Ciidamo loo samaynayo ilaalinta ammaanka Badda Cas, taas oo qorshaha hindisaheeda ay ka mid yihiin waddamada gobolka Geeska Afrika, waxaanu madaxweynuhu ku baaqay in Somaliland laga qayb-galiyo qorshahan istaraatajiyadeed.
Madaxweyne Biixi oo maanta khudbad ka jeediyey xuska munaasibadda 18-ka May waxa uu sheegay in waddankiisu diyaar u yahay ka qayb-qaadatashada isbeddellada dhaqan-dhaqaale, ganacsi iyo siyaasadeed ee ka tisqaaday gobolka Geeska Afrika, isla markaana ay Somaliland horumarkaas kaga qayb-qaadanayso iyadoo u madax-bannaan xoriyaddeeda iyo siyaasaddeeda dhuleed.
”Shacabka Somaliland waxay diyaar u yihiin in ay door weyn ka qaataan isbeddelka dhaqan-dhaqaale, ganacsi iyo bulsho ee ka socda Gobolka iyo guud ahaan Qaaradda Afrika. Somaliland waxa ay aaminsan-tahay, kuna shaqaynaysay intii ay jirtay Iskaashi, Is-xaq-dhawr iyo Daris-wanaag.
Somaliland waa Qaran madax-bannaan iyo Xaqiiqo ka jirta Gobolka Geeska Afrika. Waa Qaran ku leh qeybtiisa iyo miisaankiisa dhammaan go’aammada iyo isbeddelka ka socda Gobolka. Cidda Somaliland iska indha-tirtaa, waxay wiiqaysaa isbeddelka iyo horumarka uu beeg-sanayo Gobolka Geeska Afrika,” Sidaas ayuu yidhi Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha oo ka hadlayey Ciidamada loo samaynayo badda cas, waxa uu yidhi, ”Dhawaan waxa aynnu maqalnay in la samaynayo ciidamada nabadgelyada badda Cas, waxan la yaabahannahay ragga Isteraatajiisteyaasha ah ee fikradda leh ee gobolka katirsan ee doonaya inay badda cas nabadgelyadeeda xoojiyaan ee Somaliland ah dalka xeebta ugu badan ee badda cas, Somaliland marka laga tixgelin waayey xaggee baa loo wadaa, mise Somaliland cid baa xoog kaga qaadaysa xuquuqdeeda.”
”Arrinta nabad-gelyada Badda Cas ee hadda la hindisayo in ciidammo loo dhiso, waxaannu u aragnaa in Somaliland ka tahay tiir-dhexaad, sababtoo ah Somaliland waxay ku leedahay qayb weyn Badda Cas. Somaliland qaybta ay ku leedahay Badda Cas waxay dhan-tahay 850 Km, iyada oo kaliya ayaana ka arimisa. Sidaas darteed, dhaq-dhaqaaq kasta oo ka jira Badda Cas, Somaliland waa in ay miisaankeeda ku yeelataa,” Sidaas ayuu yidhi Madaxweyne Muuse Biixi.
Jamhuuriyadda Somaliland ayaa iska leh xeeb dhererkeedu dhan yahay 850km oo kulaalaya Gacanka Cadmeed oo biyaha Badda Cas kaga darsama marin-biyoodka Baabul-mandab, kaas oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan ee ay isticmaalaan maraakiibta ganacsi ee isaga kala goosha Bariga iyo Galbeedka Adduunka.